2 0 1 7. UTHANDO, ubulungisa UKHOLO. 2 0 1 8 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ngowe-2017 Ekuqaleni konyaka, ndifuna kuqala phambi ukulwa eli nqaku ebalulekileyo ngamaxesha YeApocalypse ezisehlelayo okwangoku kuni nonke, bazalwana bam abaziintanda noodade kuKristu and readers blog oyintanda, Iminqwenelo bam bonwabile New kunyaka 2017.
A Wonke, ndiyathemba uThixo ugcina kude izilingo noncedo ingakumbi ukuwela kwalo nyaka, 2017.
Ndiyathandaza ukuba uThixo ekunika amandla ukumelana neengxaki zobomi ukuba kwiminyaka embalwa ngakumbi kubaluleke nangakumbi.
Ngamana uThixo wakunika kwaye akugcine usempilweni. Oku ikuvumela bangaphoswa eziyimfuneko ikunika kwaye abonakalise inkxaso nothando yalo ngalo lonke ithuba.
Ngamana ukuhlala phakathi ubomi ncwadi ukwenzela ukuba kucingela ingqumbo kaThixo ehla ngcembe ihlabathi iminyaka emininzi.
Uthando, uMthetho kunye Ukholo
Qaphela ukuba eli nqaku Love, uMthetho kunye Ukholo likwancedisa nqaku:
2017 ezintlanu eziphambili
Kunyanzelekile kufuneka bazi ukuba Love, uMthetho nokholo izinto ezintathu ezibalulekileyo zamaKristu indlela yobomi kwaye ebusweni bukaThixo, ukuba asisindise okanye sigwebe nathi ngonaphakade.
Ukuze siqonde imbambano kubonakala kuluncedo ukwenza njengesikhumbuzo encinane malunga namaxesha esiphila.
Ukususela 14 Meyi 1948, njengoko sele wathi izihlandlo ezininzi, esimcikide le blog, sangena ixesha eBhayibhileni ukuya ekupheleni kwexesha.
Eli xesha iBhayibhile ukuya ekupheleni kwexesha lwenzeka ngaphaya sizukulwana sinye.
Thina uqinisekiso kwi zeVangeli (ingakumbi Mateyu 24 Link: Isiphelo Days ), nayo leyo ukuba uYesu Krestu uya kubuyela ngokwasemzimbeni eMhlabeni phambi kokuphela kwale sizukulwana lokugqibela ukuba ngukumkani khona eluntwini iminyaka eliwaka. Millenium .
Njengoko ubona, ixesha amaxesha lesiphelo luqhubela ekubandezelekeni, ngathi intlungu inenimba.
1 kwabaseTesalonika 5: 3
Ekubeni usazi ngokwakho ukuba imini yeNkosi iya kufika njengesela ebusuku. 3 Xa kuthi, Luxolo nokunqaba, Yintshabalaliso ngebhaqo phezu kwabo, kwanjengenimba komithiyo; baye bengayi kusinda. 4 Ke nina, bazalwana, anisebumnyameni, ukuba imini leyo iniqubule njengesela ; …
Intlungu yokuphela kwexesha womelela kwaye eqhubekayo njengoko sinokubona yonke imihla.
News , (Iimfazwe, namarhe eemfazwe, ukufuduka, ubunqolobi Jihad ke mlonyeni onke amajelo) intlungu yoluntu , (umonakalo, ukungakhuseleki, indlala, iintlekele, izifo, ubundlobongela kunye nelahleko lwamaxabiso ziye kwiingozi zendalo yobomi) le intlunguyezilwanyana (phaku Abafileyo zizigidi ngonyaka ngamnye ehlabathini lonke ukusukela ngo-2008 ukuya iintlanzi, iintaka nezinye izilwanyana zasendle kunye zasekhaya) kuvuzwa, ngokuswela ingcaciso, ingxelo eendaba ubuncinane kunye intlungu komHlaba (iitsunami, izantyalantyala zemvula, uMhlaba lishukuma, izaqhwithi, izikhukula, imililo neenkanyamba lisiba nokungaqhelekanga) ezamkelwa abaninzi iintlekele ezinkulu kodwa obuqhelekileyo nobugqibeleleyo kwakhona.
Iseti zonke ezi iintlungu nokuba sofumana ingcaciso ngokwahlukileyo, kodwa ukwenza yonke into engaqhelekanga kwaye ekhankanywe eBhayibhileni njengenye imiqondiso eqondisisa kungekudala ekufikeni kweNkosi yethu uYesu Kristu. Kunye nobungakanani zonke ezi iintlungu ingqina kakuhle kakhulu kukuba ixesha ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu kufutshane kakhulu.
Nangona ukuqonda kwethu amaxesha lesiphelo ukuvumela ukuba ukubonisa ukuba esi sizukulwana asisayi kudlula phambi uYesu Krestu ebuyela ngokwasemzimbeni eMhlabeni ngeminyaka eliwaka wobukumkani bakhe eliphela iminyaka eliwaka kamva ngomgwebo wokugqibela. ( Isigwebo yokugqibela iya kuba ekupheleni yomntu ofayo. Abanye baya kuba ngonaphakade phantsi komthetho kaThixo kunye nabanye ngonaphakade phantsi komthetho Khwezi).
Nangona ukuba sifumanisa ukuba intlungu waba namandla kakhulu kwaye rhoqo.
Akukho namnye unako ukuthi kakuhle xa uza kubuya uzuko lweNkosi yethu uYesu Kristu.
Siyazi ukuba iBhayibhile ngexesha isizukulwana wafana kwisithuba seminyaka engama-40, kodwa ke eyi-70 kunye 80 leminyaka kwaye kananjalo 120 leminyaka ubudala ubuninzi ubomi Genesis 6: 3
Kunjalo nangona iingxaki zobomi kunye nobungakanani iintlungu, uThixo asenza silinde de 2068 (iminyaka 1948 + 120) ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu.
UYesu Kristu wathi kubaluleke kakhulu into ethile, » Mna ndinguAlfa no-Omega, owokuqala nowokugqibela, isiqalo nesiphelo » Eli binzana ukuba uthi kathathu into enye ngokwahlukileyo ityhila eyinyaniso umntu kubaluleke gqitha kwaye okhethekileyo.
Esi sivakalisi uluncedo kakhulu luleke ludibene kwiSahluko 24 Mateyu ukuqonda kwexesha uya ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu.
Kwisahluko 24 of Matthew uYesu ucacisa ukuba yintoni eyenzekayo xa isizukulwana Elokuqala ukuzalwa ke loqalo ubuKristu (nguye lo kuqala)kwaye kuya kwenzeka ntoni ukuba isizukulwana yokugqibela phambi kokufika kwakhe. (Iya kuba njalo ke ophelileyo). Oku kuthetha ukuba ekubuyeni kwakhe ubabalo lugqityiwe kwaye ke ngoko akukho namnye uya kusindiswa luthando lwakhe kwaye ngenxa yoko ukuba basindiswe uza kuhamba Mthetho.
Kwesi sahluko 24 kaMateyu, uYesu waprofeta ukutshatyalaliswa kwetempile eYerusalem. Ngomnyaka asixhenxe lwaqhubeka kulo ukutshatyalaliswa tempile profeta naye uYesu Kristu.
Ke uqonde ukuba xa uYesu uthetha esi sizukulwana kwivesi 34 kwisahluko 24 yeVangeli kaMateyu
34 Ndithi kuni, inene, esi sizukulwana asisayi kudlula, ukuba konke oku kwenzeke.
Oku isizukulwana 70 yaye esazi ke ukuba uphawu lokuqala amaxesha lesiphelo na May 14, 1948, ukubuya kukaYesu Kristu kufuneka ungadlulanga owe-13 Meyi, 2018.
ngaba kunjalo ngendlela zilula ukuthi olu kubuya uzuko lweNkosi yethu uYesu Kristu ngenxa 2018 mhlawumbi ngenxa yePasika yombutho -2 Apreli 2018.
Akukwazeki kwaye mhlawumbi, kodwa kude ezithile ngenxa elizayo bobabo kuThixo yedwa.
Njengoko wonke ubani ubona le blog mna ukujolisa rhoqo namaxesha ngexesha kubonakala ukuba uzalane isiprofeto seBhayibhile besamkela ukubuya kweNkosi yethu.
Nangona wambi ezichongiweyo nalawo lokubuya kwakhe uzuko, baye ke amaxesha kunzima iBandla zethu nangenxa Ukholo. Ngokukodwa ngo-2015 kunye isibhengezo sikaPopu François ekupheleni kweyoMsintsi Cathedral St. Patrick kwelo USA. Apho ibango phantsi indudumo yemisebenzi yezandla lokubethelela uYesu Kristu waba ukusilela kwabantu. Link .
Injongo yale blog akuthethi ukuba atyhile umhla wokubuyiswa weNkosi yethu uYesu Kristu, kodwa ndaqonda ukuba le yokubuyisa ezithile. Ke kwisizukulwana sethu. Kwaye luzayo ngenxa ubukhulu Imiqondiso lokuzaliseka kweziprofeto zeBhayibhile ezicwangciselwe ekupheleni kwexesha.
Ndim kuphela umshumayeli lowo yazisa ukubuya kweNkosi entliziyweni yam umphefumlo.
Injongo yam ukuba athengise iphepha nangona ndibhale iincwadi ezimbini uThixo nabantu. (Lokuqala: INtshumayeli Return of uKumkani, owesibini France, Impucuko kunye Republic Drift )
Injongo yam kukuba wonke umntu balungiselele ukubuya kukaYesu Kristu ukuze basindiswe kwaye zisala ebhaliswe encwadini yobomi kwaye kungekudala ukufikelela ngonaphakade kunye noThixo hayi Khwezi.
Ukuba kwingcinga kwam ukubuya kukaYesu Kristu eIsta ngoAprili 2, 2018 ibonakalisa ukuba umhla okhethwe nguThixo ukususela ekudalweni kwehlabathi ngenxa ukubuya kukaYesu Kristu ukuba alawule uluntu ebudeni beminyaka eliwaka ukuba yentshabalalo eyahlukileyo.Ngoko ke ziinyanga-15 ukuba alinde.
Oku kuthetha ukuba ezi nyanga elinesihlanu ziya kuba kwiinyanga zibalulekileyo ebomini.
Emva kwezi kweenyanga ezilishumi siya kusindiswa okanye isohlwayo.
Abo baya kusindiswa UTHANDO
Ukususela kukumka uYesu Kristu kukho amawaka amabini eminyaka, kwiphondo yobabalo thina.
Oku kuthetha ukuba abo babhaptizelwa, baye bamkela uYesu Kristu njengomsindisi, abo baguqukayo kwizono ababenzayo, ecela uxolelo kuThixo ngomthandazo maintiennes kunye ngokunxulumene ngokomoya noMdali.
Ukuba kuhlala ebomini nenkathalo ukunceda abo bafuna uncedo lwabo.
Ngoko ewe! BangamaKristu, bayinxalenye iBandla likaYesu Krestu kwaye ziqinisekisiwe ukuba kusindiswa luthando lwakhe. Bona inqaku yam ethe ngqo: Dare Ukholo uThixo noYesu Kristu
Baya kuhlala Umhlaba ngexesha Eliwaka.
Abo baya kusindiswa uMthetho
Abaninzi ukubona imikhosi abo baphila ubomi umgangatho, ndingafuni kukwenza okubi kwabanye, kodwa siphila nje babengawazi uthando lukaYesu Kristu uya kusindiswa ezithile (iminyaka eliwaka kamva) ngokuthi Womthetho kaThixo ngomgwebo lokugqibela bonke abafileyo baya kuvuswa baze kugwetywa nguThixo ngokwemisebenzi yabo.
Abo Usindiswa Ukholo
Amanye amaKristu Usindiswa Uthando kukaYesu Kristu kwaye azalwe kwakhona! Kukuthi Ngubani acela uThixo ukukhokela ubomi babo, ukuze bemke ebubini kunye nesilingo.
Ukuqhubela phambili ubomi Uthando kukaYesu Kristu kwaye ukukholosa ngokupheleleyo kwaye epheleleyo kuThixo, kunye nentloko Qiniseka, ophezulu kwaye azingce ngokuba ngamaKristu ingakumbi ekupheleni kwexesha.
Bonke abo amaKristu kukhusela ibandla ngaphandle ugonyamelo, ngamanye amaxesha esichengeni ubomi babo ukwazisa kungekudala wokulawula Uthando Emhlabeni kunye ukubuya kukaYesu Kristu.
Bonke abo amaKristu ababeka ubomi babo kuYesu Kristu ukunceda abasweleyo, abagulayo, abasweleyo yaye abo ngokomoya zingalahlekanga.
Bonke abo amaKristu sasindiselwa uthando kukaYesu Kristu kwaye ingqina uya kusikelelwa nguThixo noYesu Kristu.
Kwezi nyanga elinesihlanu Khwezi uya zasendle kwaye betha abantu nangamandla akhe onke.
Uyaqonda ukuba nesilingo uya komelela kunye ezinkulu yaye kuya kuba nzima kakhulu kuzo zonke ukuqhubela phambili ebomini kunye ngokholo serenely.
Ngoko simele siqonde ukuba nguLusifa ukumkani wento nokuba kufuneka bahlalutye iziganeko nezenzo ukusishiya ebambeke.
Kulungile ukuqonda ukuba okuchasene uthando akusoloko abandithiyayo, kodwa ngamanye amaxesha umthande ngokwayo!
Ongafaniyo Mthetho akusoloko yokungathobeli, kodwa ngamanye amaxesha umthetho ngokwalo.
Isichasi ukholo akusoloko Thixo kodwa ukholo ngokwayo.
Ngoko ngokulula asishiye kuqonda ukuba asilumkanga.
Qonda ukuba uThixo akukho luthando kungekho mthetho, njengoko kungekho mthetho ngaphandle luthando .
Ke nguLusifa akukho uthando besenzo akukho mthetho Love .
Ndiyanimema ukuba ukucamngca ngezi ezahlukene Wothando uMthetho kaThixo Lucifer.
Xa Ukholo yintoni kuyo ukukhonza wena ucinga ukuba ukhonza uThixo kumkhonza Khwezi!
In Love uThixo kukho lweengcinga Ukuxolela, uvelwano, ukuthobeka kunye nokwabelana.
KuMthetho kaThixo kukho ingcamango yokuqonda, ubulungu kunye nokulungiswa.
In Love Khwezi ngaphandle komthetho kukho ingqikelelo, ukunxila, nenkanuko.
Emthethweni ngaphandle Love Khwezi eyadlulayo anjengo ubuzwilakhe kunye yobukhoboka.
Elukholweni kukho inowuthi yozinikelo, semoyeni, uthando nentlonelo umthetho.
Xa ukholo lukhe enkonzweni kaThixo , ngoko ke ulonwabo ecocekileyo ukuba abe nako ukukhonza uThixo ngokunceda abazalwana noodade bethu yaye ndikhusela ecaweni yethu nokholo lwethu.
Kodwa xa loo ukholo lukhe inkonzo Khwezi nto uguqula abo yayiphelela oozwilakhe lenene, abanqolobi, jihadists nezinye izidalwa ububi.
Indlela uThixo elimxinwa njengoko entunjeni yenaliti, kwaye le ndlela udlula ngoYesu Kristu kuphela.
« Ndim indlela nenyaniso nobomi; akukho namnye uzayo kuBawo, engezi ngam! «
La mazwi kaYesu Kristu neziphumo ezibi kakhulu kubo bonke iinkonzo zehlabathi.
Akukho namnye uya kusinda ukuba oku uthando kukaYesu Kristu kwaye oku kufuneka sele siyavuma ukuba ngumKristu ngokubhaptizwa emanzini.
Thina ziinyanga elinesihlanu silinde ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu ngeIsta Aprili 2, 2018.
Kodwa uThixo yedwa isigqibo umhla le lokubuya ke ngoko uya kuba mhlawumbi kamva kwaye mhlawumbi ngaphambi koko.
Kunjalo oku ukubuya ezithile kolu kufuneka alungiselele.
Ukulungiselela, kufuneka enze iinzame ukuya phambili ebomini ngamandla oMoya kungabi buthathaka umzimba.
Nazicela ekuthandazeni kuThixo ukuba kusinceda ngamaphanyazo onke ubomi bethu nokukhokela zethu linyathelo ubomi inyathelo.
Cela uThixo emthandazweni ukuba asixolele izono zethu, asihlambulule umphefumlo wethu.
Siya kwazi 2017 intuthumbo olukhulu Emhlabeni, oku ukuqiniseka ukususela amaxesha ekupheleni intlungu zithelekiswa eBhayibhileni ukuba intlungu ekubelekeni ngoko kunyaka ngamnye ekupheleni kwexesha unobubi ngaphezu yokugqibela.
Hourglass ekupheleni kwexesha uThixo wabuyela ngoMeyi 14, 1948 kunye nexesha lokugqibela elidlulileyo okuziinkozo uya kubona ukubuya kukaYesu Kristu.
Thandaza yonke imihla ukuba uThixo akayi kulibazisa le ukubuya kuba intlungu yethu nokubandezeleka yethu akuyi kupheza ukukhula kwaye ngelishwa koko baya kuqhubeka kwaye zibalasele!
Gcina elangatyeni ukholo yalikhanyisa kakuhle uze uzalise neoli entliziyweni yenu nomphefumlo wenu ukuwela ubumnyama of 2017.
Ukuba, njengokuba ndikholwa kakhulu ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu kufuneka kwenziwe 2018 (ekupheleni isizukulwana engama-70) ngakumbi ngoko 2017 akuyi kuya kuphela kwama-2016, kodwa iya kuba eyoyikekayo kuba kuya kubakho ixesha ngemini yomsindo kaThixo.
Eli nqaku kubaluleke kakhulu kuba ungekathandani bavakalisa kubuyela emhlabeni weNkosi yeenkosi, uKumkani Kumkani, uYesu Kristu, unyana okuphela kaThixo, ndiya aguqulele zonke iilwimi mna kumema Bazalwana bam abaziintanda, Dade ihlabathi ukunxibelelana ukuba bonke abafowunelwa bakho ukuze bonke babe nolwazi nokulungiselela umphefumlo wakhe.
Bazalwana abaziintanda, Dade kuKristu Yesu nawe ngamangqina kaYesu Kristu kunye ngenkalipho ukholo kunye Church lwethu.
Thandazela usindiso umphefumlo wethu, kuba bonke abazalwana noodade bethu bonke ukuba ilizwi zeVangeli hayi sindiphethe.
Ngamana uThixo anisikelele nokukhokela ubomi bakho.